Ihe Ndị Merenụ Mgbe Jizọs Nwụrụ (Matiu 27) | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
MATIU 27:45-56 MAK 15:33-41 LUK 23:44-49 JỌN 19:25-30
JIZỌS ANWỤỌ N’ELU OSISI ỊTA AHỤHỤ
IHE NDỊ DỊ EGWU MERENỤ MGBE JIZỌS NWỤRỤ
Mgbe o ruru “oge awa nke isii,” ma ọ bụ n’elekere iri na abụọ nke ehihie, ọchịchịrị dị egwu “gbachiri ala ahụ dum ruo n’oge awa nke itoolu,” ya bụ, n’elekere atọ nke ehihie. (Mak 15:33) Ọ bụghị chi na-eji mgbe ụfọdụ n’ehihie kpatara ọchịchịrị a. Mgbe chi na-eji n’ehihie bụ mgbe ọnwa ọhụrụ na-apụta apụta, ma ọnwa na-agbazu agbazu n’oge Ememme Ngabiga. Ihe ọzọkwa bụ na chi na-eji n’ehihie na-anọ naanị nkeji ole na ole. Ihe ndị a gosiri na ọ bụ Chineke mere ka ọchịchịrị ahụ gbaa.
Chetụgodị otú obi ga-adị ndị ahụ na-akwa Jizọs emo mgbe ọchịchịrị ahụ gbara. N’oge ahụ, ụmụ nwaanyị anọ bịara nso n’ebe ahụ a kpọgidere Jizọs n’osisi. Ha bụ nne Jizọs, Salomi, Meri Magdalin, na Meri, bụ́ nne Jems nke Nta, bụ́ otu n’ime ndịozi Jizọs.
N’oge Meri, nne Jizọs, guzo “n’akụkụ osisi ịta ahụhụ Jizọs” na-eru uju, Jọn onyeozi nọ ebe ahụ. Meri nọ ebe ahụ na-ahụ ka nwa ọ mụrụ ma zụọ nọ n’elu osisi ịta ahụhụ ahụ na-ahụsi anya. Ọ dị ya ka ‘à manyere ya ogologo mma agha n’obi.’ (Jọn 19:25; Luk 2:35) N’agbanyeghị na Jizọs nọ n’ahụ́ ụfụ, ọ nọ na-eche banyere nne ya. O jisiri ike felaa isi n’ebe Jọn nọ ma gwa nne ya, sị: “Nwaanyị, lee nwa gị!” O felakwara isi n’ebe nne ya nọ ma gwa Jọn, sị: “Lee nne gị!”—Jọn 19:26, 27.
Jizọs si otú a kpọnye onyeozi ya ọ hụrụ n’anya nne ya ka ọ na-elekọta. Ọ ga-abụ na di Meri anwụọla mgbe ahụ. Jizọs ma na ụmụnne ya nwoke ndị nne ji ya na ha enwebeghị okwukwe n’ebe ọ nọ. N’ihi ya, Jizọs mere ka nne ya nwee onye ga na-egboro ya mkpa ya ma na-enyere ya aka ịnọsi ike n’ofufe Chineke. Ihe a Jizọs mere magburu nnọọ onwe ya.
Mgbe ọchịchịrị ahụ gbachara, Jizọs kwuru, sị: “Akpịrị na-akpọ m nkụ.” Ihe a Jizọs kwuru mezuru amụma dị n’Akwụkwọ Nsọ. (Jọn 19:28; Abụ Ọma 22:15) Jizọs chọpụtara na Nna ya akwụsịtụla ichebe ya ka e nwee ike ịma ma ọ̀ ga-akwụsi ike n’okwukwe ya ruo ọnwụ. N’ihi ya, o tiri mkpu, sị: “Eli, Eli, lama sabaktani?” nke pụtara ma a sụgharịa ya, “Chineke m, Chineke m, gịnị mere i ji gbahapụ m?” O nwere ike ịbụ asụsụ Arameik a na-asụ na Galili ka Jizọs ji tie mkpu a. Ụfọdụ ndị nọ nso ghọtahiere ihe Jizọs kwuru ma sị: “Lee! Ọ na-akpọ Ịlaịja.” Otu n’ime ha gbaara ọsọ mikpuo ogbo n’ime mmanya gbara ụka, fanye ya n’osisi ma welie ya tinye ya n’ọnụ ka ọ ṅụọ. Ma ndị ọzọ sịrị: “Hapụnụ ya! Ka anyị hụ ma Ịlaịja ọ̀ ga-abịa kpọdata ya.”—Mak 15:34-36.
Jizọs tiri mkpu, sị: “E mechawo ya!” (Jọn 19:30) N’eziokwu, o mechaala ihe niile Nna ya zitere ya n’ụwa ka o mee. N’ikpeazụ, Jizọs kwuru, sị: “Nna, n’aka gị ka m na-enyefe mmụọ m.” (Luk 23:46) Jizọs si otú a nyefee Jehova ndụ ya. Obi siri ya ike na Chineke ga-akpọlite ya n’ọnwụ, n’ihi ya, o hulatara isi wee kubie ume.
Ozugbo Jizọs kubiri ume, oké ala ọma jijiji mere, gbawasịa nkume. Ala ọma jijiji ahụ dị egwu nke na ọ gbawara ọtụtụ ili ndị dị n’azụ Jeruselem, bọpụta ozu ndị nwụrụ anwụ. Ndị na-agafe agafe, bụ́ ndị hụrụ ozu ndị ahụ, banyere “n’obodo nsọ” ahụ kọọrọ ndị mmadụ ihe ha hụrụ.—Matiu 27:51-53.
Mgbe Jizọs nwụchara, ogologo ákwà mgbochi nke kewara Ebe Nsọ na Ebe Kasị Nsọ n’ụlọ nsọ Chineke dọwara abụọ si n’isi ruo ala. Ihe a merenụ gosiri na Chineke na-ewesa ndị gburu Ọkpara ya iwe, gosikwa na ụzọ e si abanye n’Ebe Kasị Nsọ, ya bụ, eluigwe, emepeela.—Ndị Hibru 9:2, 3; 10:19, 20.
Ihe ndị a merenụ mere ka ndị mmadụ tụọ ụjọ. Onyeisi ndị agha nke hụrụ maka ogbugbu Jizọs kwuru, sị: “N’ezie, nwoke a bụ Ọkpara Chineke.” (Mak 15:39) O nwere ike ịbụ na ọ nọ mgbe Paịlet na-ekpe Jizọs ikpe na o kwuru na ọ bụ Ọkpara Chineke. Ugbu a, o doola ya anya na Jizọs bụ onye ezi omume, bụrụkwa Ọkpara Chineke.
Ndị ọzọ “tiiri aka n’obi na-ala” n’ihi na ihe ndị ahụ merenụ wutere ha nke ukwuu. (Luk 23:48) Ụfọdụ n’ime ndị nọ ebe dịtụ anya na-ele ihe niile na-emenụ bụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị na-eso ụzọ Jizọs. Ha na-eso ya agagharị mgbe ụfọdụ. Ihe niile a merenụ wutekwara ha nke ukwuu.
“KPỌGIDE YA N’OSISI”
Ndị iro Jizọs tiri mkpu, sị: “Kpọgide ya n’osisi!” (Jọn 19:15) Okwu Grik e si sụgharịta ‘osisi’ n’akwụkwọ Matiu, Mak, Luk, na Jọn bụ stau·rosʹ. Otu akwụkwọ a na-akpọ History of the Cross kwuru, sị: “Stauros pụtara ‘osisi kwụ ọtọ,’ nke siri ike, ụdị ahụ ndị ọrụ ugbo na-eji agba ubi ha ogige. O nweghị ihe ọzọ ọ pụtara.”
Gịnị gosiri na ọ bụghị chi na-eji n’ehihie mgbe ụfọdụ kpatara ọchịchịrị ahụ gbara awa atọ?
Olee ihe Jizọs mere nke gosiri na anyị kwesịrị ịna-elekọta nne na nna anyị merela agadi?
Gịnị ka ala ọma jijiji ahụ merenụ kpatara? Olee ihe ákwà mgbochi dọwara abụọ n’ụlọ nsọ na-egosi?
Olee otú ọnwụ Jizọs na ihe ndị merenụ mgbe ọ nwụrụ si metụ ndị mmadụ n’obi?
Ihe Meri, bụ́ nne Jizọs, mere nwere ike inyere gị aka mgbe ọ bụla nsogbu bịaara gị, ya adị gị ka à manyere gị “ogologo mma agha” n’obi.